Blackjack 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Blackjack-online.app
Blackjack dia lalao izay lalaovina amin'ny karatra amin'ny filokana ary azo lalaovina 1 ka hatramin'ny 8 decks misy karatra 52, izay ny tanjona dia ny hanana isa betsaka kokoa noho ny mpanohitra, nefa tsy mihoatra ny 21 (raha resy ianao). Ny mpivarotra dia mety mahazo karatra 5 farafaharatsiny na hatramin'ny 17.
Blackjack: ahoana no filalaovana tsikelikely? 🙂
Mba hilalaovana Blackjack maimaim-poana amin'ny Internet dia mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Dingana 1. Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana mankamin'ny tranonkalan'ny lalao Emulator.online.
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao ary afaka manomboka milalao ianao.
Dingana 4. Manakaikeza araka izay azonao atao amin'ny 21.
Inona no atao hoe blackjack?🖤
Blackjack dia iray amin'ireo lalao karatra malaza eran-tany. Ny lalao dia tsotra, intuitive ary na iza na iza afaka milalao azy. Ny Blackjack dia azo lalaovina amin'ny birao maromaro manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 8, miaraka amin'ny karatra 52 avy. Ho fanampin'izay, misy ny safidy hilalao blackjack an-tserasera.
Tsotra ny tanjon'ny lalao: hahatratra ny isa azo tratrarina indrindra, tsy mihoatra ny isa 21. Mba hahatratrarana izany tanjona izany dia mahazo karatra roa ilay mpilalao amin'ny voalohany, saingy afaka mangataka bebe kokoa mandritra ny lalao.
Ny isa azo tratrarina indrindra dia antsoina hoe Blackjack, ka izany no ananan'ilay lalao ity anarana mahafinaritra ity.
Blackjack, araka ny fantatsika azy, dia nivoatra tamin'ny lalao samihafa tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay natao tany Eropa. Ny ankamaroan'ireo lalao ireo dia nanana zavatra itoviana: ny tanjona dia ny hahatratra ny 21.
Ny firesahana voalohany momba ireo lalao ireo dia natao tamin'ny 1601 ary eo amin'ny asan'i Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Ity tantara ity dia milaza ny fiainana sy ny alahelon'ny rogues Sevillian roa tamin'ny vanim-potoana volamena, izay tena mahay amin'ny filalaovana lalao antsoina hoe "Ventiuno".
Ny kinova frantsay Hafa kely ny lalao 21, satria azon'ny mpivarotra atao avo roa heny ny filokana ary ny mpilalao miloka aorian'ny fihodinana tsirairay.
Amin'izany, ny kinova italiana, izay manana ny anarana Fito sy Tapany, dia manaiky fa ny lalao dia alefa miaraka amin'ny tarehin-tarehy, ary koa ny isa 7, 8 ary 9. Niovaova ny lalao tamin'ny kinova Italiana satria, araka ny anarany, ny tanjona dia tokony hahatratra teboka fito sy sasany. Mazava ho azy fa raha miampita ny marika fito sy sasany ny mpilalao dia resy izy ireo.
A Tonga i Amerika taorian'ny Revolisiona frantsay, ary tamin'ny voalohany dia tsy dia malaza loatra izany amin'ny filokana. Mba hisarihana ny mpilalao amin'ity lalao ity dia nanolotra bonus isan-karazany ny tompony. Ny safidy malaza indrindra dia ny rafitra fandoavam-bola 10-to-1, ho an'ny tanana misy spade sy blackjack. Nantsoina hoe Blackjack ilay tanana, nanome ny anarany ny lalao.
Ny Blackjack dia lalao iray misy karazany maro ao anatin'ny trano filokana ihany. Eto izahay dia manolotra ireo fiovaovana be mpampiasa indrindra:
Izy io dia fiovana iray mitovy amin'ny tany am-boalohany, lalaovina ara-dalàna miaraka aminy Dobaka 6 ka hatramin'ny 8 an'ny karatra 48.
Na izany aza, eto Azo atao ny mampitombo avo roa heny ny karatra, toy ny azo atao ny mametaka karatra iray hafa aorian'ny fanesorana ny aces.
Amin'ny Espaniola 21, ny mpilalao Blackjack dia mikapoka hatrany ny mpivarotra.
Multi-tanana Blackjack dia lalaovina amin'ny fomba mitovy amin'ny Blackjack mahazatra ary matetika miseho amin'ny trano filokana an-tserasera satria mamela ny mpilalao hanana hatramin'ny 5 tanana samihafa mandritra ny lalao iray ihany.
Ity fiovana ity dia lalaovina amin'ny dabilio 5 miaraka.
Ity kinova ity dia lalaovina Karatra 52 ary afaka mangataka foana ianao hamoritra ny lalao amin'ny 9 na Ace. Na izany aza, amin'ity kinova ity raha manana Blackjack ny mpivarotra dia very ny filokana manontolo.
Ny Blackjack Switch dia manome anao hetsika vitsivitsy izay ho sokajiana ho mpisoloky amin'ny lalao karatra mahazatra.
Na izany aza, io fiovana io tanterahina amin'ny dabilio 6 ka hatramin'ny 8, manana tanana roa samy hafa foana ireo mpilalao, atrehana miatrika ny karatra ary afaka mifanakalo ireo karatra amin'ny tanany ireo mpilalao.
Ny Vegas Strip dia fiovan'ny Blackjack hafa ary nilalaovana tamin'ny 4 decks an'ny karatra 52. Eto dia voatery mijanona ny mpivarotra raha toa ka 17 ny totalin'ny karany.
Ary koa, ny mpilalao dia afaka manala ireo karatra roa voalohany ary manamboatra ny tànany.
Fantatsika izao ny atao hoe blackjack sy ny fiheverany fototra, saingy alohan'ny hilalaovana blackjack amin'ny casino an-tany na an-tserasera dia tsy maintsy mianatra ianao ary mahafehy ny lalàna blackjack. Io dia hahafahanao mahazo aina bebe kokoa mandritra ny fiainanao voalohany amin'ny lalao ary hahafahan'ny lalao misokatra haingana kokoa ho an'ireo mpilalao rehetra eo amin'ny latabatrao.
BlackJack dia lalao paikady, lalaovina amin'ny latabatra iraisana ahafahan'ny mpilalao maromaro milalao, fa ny tsirairay dia miankina amin'ny paikadiny ary milalao tsirairay manohitra ny mpivarotra.
Ny tanjon'ny mpilalao tsirairay dia ny hahatonga ny 21 na hahazo ny tanany manakaiky ny 21. Ny mpilalao na ny mpivarotra dia manao BlackJack raha ny karatra fanombohany roa dia Ace sy 10 (karatra Ace + 10, na karatra Ace plus).
Manomboha milalao 🖤
The BlackJack Amin'ny ankapobeny dia lalaovina amin'ny karatra decks 6 miaraka aminy izay miovaova eo anelanelan'ny lalao tsirairay.
Ao amin'ny fihodinana voalohany Ny karatra natolotra ny mpilalao dia atrehana miatrika, afa-tsy ny karatra voalohany an'ny mpivarotra izay atohoka ambany.
Rehefa atolotra ny karatra filalaovana faharoa dia atrehana daholo ny karatra ary ny lanjan'ilay karatry ny mpivarotra no hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra horaisin'ny mpilalao momba ny lalao.
Ny lanjan'ny karatry ny mpivarotra dia tokony ho foana ambonin'ny 17Raha atao teny hafa, raha manana karama ambany noho ny 17 ny karatra roa voalohany an'ny mpivarotra dia tsy maintsy manoritra karatra bebe kokoa izy mandra-pahatongany amin'ny farafaharatsiny 17 sy farafaharatsiny 21.
Raha mihoatra ny 21 ny mpivarotra dia manamarina izy ary mandresy daholo ny mpilalao. Raha toa ka mametraka soatoavina eo anelanelan'ny 17 sy 21 ny mpivarotra dia mandresy ny mpilalao manana lanjany ambony dia mifamatotra amin'ny isa mitovy ny mpilalao ary ny mpilalao manana sanda ambany kokoa noho ny resin'ny mpivarotra ny filokana.
BlakJack dia mandoa 2 ka hatramin'ny 1, fa raha manao BlackJack ny mpilalao dia mandresy 3 ka hatramin'ny 2 izy ireo. Raha ny Dealer BlackJacks dia mandresy ny tanana rehetra eo ambony latabatra izy, eny fa na dia ireo manana sanda 21. Rehefa ny mpilalao sy ny Dealer BlackJack, dia raisina ho fatorana izany ary tsy misy karama.
Amin'ny ankapobeny ianao dia hahita fampahalalana isaky ny latabatra blackjack izay manondro ny fetra farany ambany sy farafahakeliny fatratra amin'izany latabatra izany. Raha manondro € 2 - € 100 ny fetran'ny latabatra, midika izany fa € 2 ny kely indrindra ary 100% ny filokana farany ambony.
Sarany karatra Blackjack
Ny karatra tsirairay avy amin'ny 2 ka hatramin'ny 10 dia samy manana ny lanjan'ny tarehiny (mitovy amin'ny isan'ny karatra).
Jacks, mpanjakavavy ary mpanjaka (isa) dia 10 isa.
Ny Ace dia mendrika isa 1 na teboka 11, amin'ny safidin'ny mpilalao arakaraka ny tanany sy ny sanda izay ankafiziny indrindra. Rehefa milalao BlackJack amin'ny Internet, ny rindrambaiko dia mihevitra ny sandan'ny Ace izay manararaotra indrindra ny mpilalao.
Na inona na inona fiovaovan'ity lalao ity, ny karazana fihetsiketsehana dia mitovy amin'izy rehetra.
Mihetsika Blackjack Blackjack
Hay 5 karazana tsy mitovy amin'ny fihetsehana.
Mitsangàna (atsaharo) Araka ny lazain'ny anarany dia afa-po amin'ny tànany ilay mpilalao ary tsy te handray karatra intsony.
Hit: mitranga rehefa te handray karatra hafa ny mpilalao.
Double: Raha mahatsapa ilay mpilalao fa mila karatra fanampiny iray (iray fotsiny) dia azony atao ny mangataka ny hampitomboana avo roa heny ny filokana ary hahazo karatra iray hafa. Zava-dehibe ny manamarika fa ity safidy ity dia tsy azo atolotra afa-tsy amin'ireo karatra roa voalohany azonao.
Divide: Raha manana karama mitovy ny karatra roa voalohany azon'ny mpilalao dia afaka misafidy ny hizara azy roa ho tanana roa izy. Amin'ity tranga ity, ny karatra tsirairay dia ho karatra voalohany amin'ny tanana vaovao. Ankoatr'izay, ilaina ihany koa ny mametraka filokana vaovao (mitovy lanja amin'ilay voalohany) ho an'ity tanana vaovao ity.
Manaiky ho resy: Misy ny casino izay mamela ny mpilalao hilona aorian'ny nahazoany ny karatra roa voalohany. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia very hatrany amin'ny 50% ny vola alefanao amin'ny voalohany.